Zimbabwe - BBC News Somali
Duufaanta Idai: Tira dhimasha cusub oo laga soo sheegay dalka Mozambique
Ugu yaraan 700 oo qof oo kale ayaa la sheegayaa iney duufaanta Idai ku dishay waddamada Mozambique, Zimbabwe iyo Malawi.
25 Maarso 2019
Shaqaalaha gurmadka oo ku howlan sidii ay u gaari lahaayeen goobaha ay duufaanta ku habsatay
Hay'adaha samafalka ayaa sheegay kumannaan qof iney weli u baahan yihiin gurmad degdeg ah
Zimbabwe oo looga dhawaaqay xaalad musiibo qaran
Tan iyo markii ay ku dhufatay xeebta Mozambique khamiistii, duufaantaasi ayaa ku qasabtay kumannaan qof in ay guryahooda ka baxaan.
17 Maarso 2019
Ma habboontahay in xildhibaannada qaar iskuul dib ugu laabtaan
Xildhibaan ayaa ku dooday in mudaneyaasha qaar ay iskuul billaabaan
8 Maarso 2019
Mucaaradka Zimbabwe oo shuruudo ku xiray wadahadal ay la yeeshaan dowladda
Dalka Zimbabwe waxaa muddo toddobaad ah ka socday dibaxyo ay ka dhasheen dhimashada ugu yaraan 5 qof.
22 Jannaayo 2019
Mucaaradka Zimbabwe oo ka cabanaya cadaadis kaga imanaya dowladda
Mucaaradka dalka Zimbabwe ayaa ka cabanaya olole lagu ugaarsanayo, iyadoo dalkaasi ay ka socdaan dibaxbaxyo looga cabanayo qiimaha shidaalka oo sare u kacay.
Saddex qof ayaa maxkamad lagusoo taagay dalka Zimbabwe, kuwaas oo lagu eedeeyey in ay xadeen boorso ay ku jirto $150,000 oo kaash ah oo uu lahaa madaxweynihii xilka laga tuuray ee dalkaas, Robert Mugabe.
Mucaaradka Zimbabwe oo iska fogeeyay eedaymo culculus oo loo jeediyay
Hoggaamiyaha mucaaradka ugu tunka wayn dalka Zimbabwe ayaa diiday in uu taageerayaashiisa ku dhiirigaliyay in ay dhigaan mudaaharaadkii rabshadaha watay ee doorashada ka dib dhacay kaas oo horseeday in ay lix ruux dhintaan bishii Agoosto.
27 Nofembar 2018
In ka badan 30 sano ayuu dal ka talinayay balse hadda socodka ayaa dhib ku ah
Waxaa lagu daweynaya isbitaall ku yaalla dalka Singapore labadii bilood ee lasoo dhaafay balse xannuunka uu la il daran yahay lama sheegin.
25 Nofembar 2018
Maxay maxkamadda dastuuriga ee Zimbabwe ka tiri doorashadii lagu murmay?
Doorashadii ka dhacday dalkaasi oo aheyd middii ugu horeesay ee uusan ka qeyb gelin madaxweynihii mudada dheer soo maamulayay dalkaasi, Robert Mugabe ayaa rabshadihii ka dhahsay waxaa ku dhintay dhowr qof.
24 Agoosto 2018
Zimbabwe: Xisbiga Zanu-PF oo beeniyay in doorashada ay ku shubteen
Xisbiga haya talada dalka Zimbabwe ee Zanu PF ayaa sheegay in codsiga xisbiga mucaradka ee ah in doorashadii madaxwaynanimada waxba kama jiraan laga soo qaado ay tahay mid aan lahayn wax micno ah.
15 Agoosto 2018
Munaasabadda maanta oo Axad ah la filayay in lagu caleema saaro madaxweynaha cusub ee dalka Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ayaa hakad la galiyay ka dib markii ay garabka mucaaradka gudbiyeen dacwad ka dhan ah natiijada doorashada.
11 Agoosto 2018
Madaxweynaha Zimbawe oo isku duubni ku baaqay
Emmerson Mnangagwa ayaa sheegaya in uu madax u noqon doono dhamaan dadka reer Zimbabwe waxa uuna dadka ugu yeeray in ay midoobaan kadib khilaafkii ka dhashay doorashadii uu ku guulaystay.
3 Agoosto 2018
Rabshado ka dhashay ismari waaga xisbiyada ku loolamaya doorashada
Qaramada Midoobay iyo dowlada Ingiriiska ayaa walaac ka muujiyey rabshadahii ka dhacay dalka Zimbabwe oo ay ku dhinteen saddex qof oo ra'yid ah kaddib markii ay ciidamada dowlada ku fureen xabado.
2 Agoosto 2018
Taageerayaasha mucaaradka ayaa dhigana banaanbaxyo
Dhinacyada siyaasadda ayaa midba midka kale ku edeeyay in iyaga ay bilaabeen rabshadaha.
1 Agoosto 2018
Xisbiga Zanu-PF ee Zimbabwe oo kuraas badan ku guulaystay
Xisbiga haya talada dalka Zimbabwe ee Zanu-PF aya ku guulaystay inta badan kuraasta baarlamanka dalkaasi, sida ay muujinayaan natiijooyiin aan dhamaystirnayn.
Dadka reer Zimbabwe oo u dareeray doorasho aan Mugabe sharraxnayn
Dadka reer Zimbabwe ayaa codkooga ka dhiibanaya doorashadii ugu horraysay ee dalkaa ka dhacda tan iyo markii Robert Mogabe xukunka laga tuuray bishii Noofember ee kal hore.
30 Luulyo 2018
Madaxweyne Mugabe oo doorasha barri hadal lama filaan ka sheegay
Iyada oo ay maalin un ka harsan tahay cod bixinta doorashada dalkaasi ka dhaceyso ayuu madaxweynihi xilka ka degay uu sheegay inuu u codeyneyn Zanu PF.
29 Luulyo 2018
Hogaamiyaha Zimbabwe oo ku baaqay in midab-kala sooca laga gudbo
Madaxweyne Emmerson Mnangagwa ayaa beeraleyda caddaanka u ballan qaaday inuu arrinta dhulka xallinayo, xilli ay doorashada guud dalka ka dhaceyso july 30.
Qaraxi Zimbabwe iyo Grace Mugaabe maxaa ka dhaxeeya?
Madaxweynaha Zimbabwe ayaa sheegay qaraxi la rabay in lagu khaarijiyo iney ka dambeysay koox ay taageerto Grace Mugabe.
28 Juunyo 2018